Bianca Belair Yevacheche Nhau Plus Untold Biography chokwadi
musha nyika dzakabatana WWE Superstars Bianca Belair Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Bianca Belair Biography inokuudza chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki - amai, (Travonda Blair), baba (Leonard Blair), Mhuri, Mudzimai (Montez Ford), nezvimwe.
Zvikuru, Vanin'ina vemumhanyi wechikadzi (Jeffery, Leonard Jr., Jermaine, naJasta), Muhoro, wakakosha, Hupenyu hweMunhu uye Mararamiro.
Kuita kuti nyaya ipfupike, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weiyo Hupenyu nhoroondo yeAmerican nyanzvi wrestler. Yedu Biography inotanga kubva pahudiki hwake nguva kusvika ave nemukurumbira.
Kuti uwedzere kufanana kwako neyememoir yedu, tinopa gwara nzira yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwaBianca Belair. Kunze kwekusahadzika, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupikisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Bianca Belair Biography - Tarisa hupenyu hwake trajectory kubva paucheche kusvika mukurumbira.
Ehe, tinomuziva nekusaita tsitsi. Moreso, mashandisiro aanoita bvudzi rake refu kurukwa kuzvambura vanopikisa kuti vacheke.
Kunyangwe kurumbidza kwake, isu tinoziva kuti vateveri vashoma chete ndivo vakaverenga pfupiso yeBianca Belair's Biography.
Naizvozvo, isu tazviona sezvakakodzera kuti tikushandire iwe inonakidza nyaya yaBianca Belair uye nekuparara kwebasa rake rekumhanya. Tichisimuka, ngatitangei.
Bianca Belair Yevacheche Nyaya:
Kutanga, Bianca Nicole Crawford (née Blair) akazvarwa pazuva re9th raApril 1989 kuna amai vake, Travonda Blair uye baba, Leonard Blair. Bianca Nicole Crawford, aka Bianca Belair, akaberekerwa mutown town inozivikanwa seKnoxville, Tennessee, muUS.
Iye akazvarwa pakati pehama dzake ina (Jeffery Phillips, Leonard Jr., Jermaine, naJasta). Pazasi payo pikicha yevabereki vake - Travonda Blair naLeonard Blair.
Tarira baba vaBianca Belair, Leonard Blair naamai, Travonda Blair.
MuAmerican nyanzvi wrestler akakurira muKnoxville, Tennessee. Akapedza yakawanda yehuhwana hwake nguva achibudirira mumitambo mizhinji. Bianca Belair aimbove mutambi uye mutambi wenhandare.
Wechidiki Chap akakwikwidza mumatambudziko. Akave neakadaidzwa nemunyori weESPN Sean Hurd kuti "ingangoita makore matanhatu basa rekumhanya." Yake track track yakamuona achienda kumatunhu matatu akasiyana epamusoro.
Ndichiri kukura, Belair akatanga kusona mapillowcases pamwechete, uye zvakashanduka mukati make achitora majee ehama yake, achizvicheka, achisona kuitira kuti vamukwane, nekugadzira mabhandi kubva kwavari.
Mufananidzo wehucheche waBianca Belair.
Bianca Belair Mhuri Yemamiriro:
Mutambi weLady anowana kurudziro mumuti wemhuri yake. Nekuratidzwa kwekutanga, Bianca Belair ndewemhuri yepakati-kati.
Dzinza rake rinosanganisira varume nevakadzi vakabatsira kuputsa nzvimbo itsva panguva yeCivil Rights Movement.
Iye anouya achibva kumutsara murefu wetrailblazers. Pokugara, mbatya, nedzimba zvaisava nyaya. Vakanga vaine zvakakwana zvekuchengeta nhengo yega yega yemusha.
Bianca Belair Mhuri Kubva:
Ngatitarisei madzitateguru ake anoshamisa. Bianca Belair akabata chizvarwa cheAfrica-America. Iye chizvarwa cheKnoxville, Tennessee.
Mhuri yekwaBelair ine nhoroondo refu yevatorwa vemuAfrica. Nekudaro, dzinza rake rakagara muUS mazana emakore apfuura.
Zvakasarudzika, sekuru vaBianca Belair ndiEdward N. Toole. Iye aive wekutanga marezinesi eAfrican American magetsi muDurham, NC. Kunyangwe pa95 mu1993, aive achiri marezinesi uye achishandisa magetsi.
Kune rimwe divi, muzukuru wake ndiEdward G. High. Aive nebasa muhutano uye biochemistry. Zvakare, kuwana dhigirii ra master mune organic chemistry uye degree rezvechiremba mune zvipenyu kemisitiri.
Akaita zvidzidzo zvake muAfrica, Latin America, South America uye Middle East. Moreso, tete vaBianca Belair, ndiMiranda Hunt. Aive mumwe wevatema vekutanga kubatanidza St. Cecilia High Chikoro muNashville, Tennessee.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki ndiye godfather waamai vake, Z. Alexander Looby. Aive gweta uye murwiri wekodzero dzevanhu muNashville.
Saka, nekureva, tinogona kufunga kuti Bianca Belair muAfro-American. Iye anobva kuKnoxville, Tennessee. Pazasi pane kuratidzwa kwekwakabva mhuri yake.
Chiratidziro chemhuri yaBianca Belair kwakatangira.
Bianca Belair Yekutanga Basa:
Belair yakatanga ne track uye munda. Ipapo, akazova mukwikwidzi weCrossFit uye powerlifter. Akambobuda mumagazini yeRX, magazini yeFemme Rouge.
Zvakangodaro, Blair akamanikidzwa kusiya basa rake reCrossFit nekuda kweiyo intercostal chondritis. Isu tinoziva zvakare chirwere sekuchinja-kwembabvu syndrome.
Bianca Belair, zvakare anosimudza muchinjikwa.
Nguva pfupi mushure meCrossFit basa rake, muAfro-American akapinda ruzivo rwake muWWE tarisiro database.
Kupinda kwacho kwainge kwanyanya pane kufunga chaiko. Pasati papera mavhiki maviri gare gare, akawana meseji yenhau kubva kuWWE veteran Mark Henry.
Iye Veteran anga asangana neprofile yaBlair padunhu reCrossFit. Saka, Mark Henry akamutorera tryout. Mushure mekuyedza kwechipiri kwepamutemo, Bianca Blair akasaina kontrakiti neWWE musi wa12 Kubvumbi 2016 ndokupihwa WWE Performance Center muOrlando, Florida.
Blair panguva yake yekutora nemumunda mazuva.
Bianca Belair Dzidzo:
Akaenda kuAustin-East Magnet kuChikoro chake chepamusoro muKnoxville, kwaakatora chikamu mumitambo yakawanda, kunyanya matraki. Zvishoma nezvishoma, Akaenda kuYunivhesiti yeSouth Carolina uyezve kuTexas A & M University.
Mushure megore rese asina kukwikwidza, akatamira kuYunivhesiti yeTennessee.
Paaive kuUT, akatora chikamu muzvipingamupinyi zve100 ne400 senhengo yechikwata che track.
Bianca akawana All-SEC (All-Southeastern Conference) uye All-American honors.
Mufananidzo wekunakidzwa nevabereki (Leonard naTravonda) pamusoro pekupedza kudzidza kwaBianca kubva kuU.
Bianca Belair Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Mutambi wechidiki akaita kuti aonekwe kwekutanga panguva ye-in-ring segment paNXT live chiitiko musi we25th waJune 2016 se "Binky Blair".
Panguva iyoyo, akazvizivisa kuti ndiye "EST weNXT." Nekudaro, akarasikirwa naAliyah, achimuita in-ring debut munaGunyana.
Zvisineyi, Bianca akaita kumwe kuratidzika paNXT kutanga musi wa24 Ndira 2018. Akachengetedza nzira isina kukundwa kurwisa varwi Candice LaRae, Aliyah, nevamwe vakati wandei.
Zvadaro, muna Kubvumbi wegore rimwe chetero, Binky akamuita WrestleMania debut achionekwa muWrestleMania Women's Battle Royal.
Mafambiro ake akakosha anosanganisira Kumira Kwemauto Press, KOD (Kutsvoda kwerufu), Powerslam uye Nirvana.
Kuonekwa kwaBianca paNXT kutanga mu2018 kwaakaramba aine undefeated streak.
Bianca Belair Biography- Kumuka Mukurumbira:
Pa 2020 Drafti muna Gumiguru, wemuAmerican mutsimba akatanga kunyoreswa kuSmackDown brand. Akanga asingatyi kutora njodzi huru. Blair akatanga mufananidzo-wakakwana mazana mana nemakumi mana neshanu achipesana naKairi Sane.
Saizvozvo, akapa mukana wekumira mu2020 Yevakadzi Royal Rumble Match. Blair akapedza anopfuura maminetsi makumi matatu nematatu uye akabvisa vakwikwidzi vasere. Bianca Belair akahwina mutambo weRoyal Rumble.
Belair akapa standoff performance mu2020 Yevakadzi Royal Rumble Match.
Nyanzvi yemutsimba yekuAmerica Bianca Belair akaita mukurumbira paakakunda mutambo weRoyal Rumble wevakadzi muna 2021 nekubvisa Rhea Ripley.
Naizvozvo, kuve wechipiri-nguva yeAfrican American Superstar kusvika iyi feat munhoroondo yeWWE. Ona clip pazasi.
Nekusaziva, Bianca Belair akatadza kudzikamisa kufara kwake pakuhwina.
Pamusoro pezvo, akabata zita reSmackDown Women's Champion mushure mekurwisana Sasha Banks kumutambo wemusoro kuWrestleMania 37. Chaive chiitiko chisingakanganwike.
Kuzadzikisa zita reSmackDown Women's Champion 2021.
Ndiani Bianca Belair Kufambidzana?:
Belair akaroora kune mumwe mutsimba wenyanzvi, Kenneth Crawford. Kenneth akasaina kuWWE muna 2014 uye akatanga muna 2015.
Anokwikwidza muNXT seMontez Ford. Vaviri ava vakachinjana mhiko pamusi wa23 Chikumi 2018.
Vese vari vaviri vanogara muOrlando, Florida, United States. Pamusoro pazvo, mubatanidzwa wevaviri ava hausati wabereka vana.
Kunyange zvakadaro, Montez Ford ane vana vaviri kubva muukama hwekare.
Bianca Belair akazova amai vokurera vevana vaviri vaFord paakaroora iye.
Bianca Blair naiye hubby, Kenneth 'Montez Ford' Crawford.
Zvizhinji nezve iyo WWE nyeredzi Montez Ford?
Kenneth Crawford akaberekwa pazuva re31st raMay 1990 muChicago. Akazoenda kuNorth Carolina uye akave nyeredzi yekumira ari kuchikoro chesekondari.
Zvakare achimhanya track, aive nhengo yeJunior Reserve Officers 'Training Corps (JROTC).
Apedza chikoro, akabatana neUnited States Marine Corps. Akashanda pakati pe2008-2012.
Paaikura, aifarira kuona mutsimba uye vaaida vaive Stone Cold Steve Austin, The Rock, naShawn Michaels.
Montez Ford inozivikanwa nemitambo yake yemitambo uye inofamba-famba.
Montez Ford agara achifarira kuita wrestler asi akataura kuti aisaziva pekutangira.
Saka, muna 2014, neimwe nzira akasaina uye akaudza WWE Performance Center, kutanga muna 2015. Aizova mutsigiri weNXT brand.
Akazotanga timu yeteki naAngelo Dawkins. Uyezve, Montez Ford naDawkins vakazvidaidza kuti Iyo Mibairo Yemugwagwa. Iwo maStreet Profits akazova fan anodiwa muNXT, mukova wavo wainakidza.
Montez akazozivikanwa nokuda kwemaitiro ake emitambo uye mafambiro epamusoro-soro. Ford akabva asangana naBelair muWWE uye akachata makore maviri mushure mekusangana.
Zuva ravo rekutanga rakaitika muna 2015 paThe Blue Man Group. Husiku hwakapera, tichitaura mupaka kwemaawa.
Mufananidzo unofadza waBianca Belair, Montez Ford nevana vavo.
Bianca Belair Hupenyu Hwemhuri:
Kunyangwe zvaakawana zvakawanda, mhuri yake inomukurudzira kuti ape uye aenderere mberi nenhaka yake huru kunyangwe vachirwisa. Vakarwa, vakarwa, uye vakawana mijenya semhedzisiro, vachigadzira nzira dzekubudirira kwaBlair.
Imba yake kusvika parizvino yakagadzira nharaunda ine zvakawanda zvinogoneka. Ngatitorei pfupi nezve nhengo yega yega yeimba yavo.
Imwe yemapikicha emuchato nenhengo dzemhuri.
Zvizhinji Nezve Bianca Belair Baba - Leonard Blair:
Zvakare zveAfro-America nyika, baba vaBianca Belair, Leonard Blair, anoda Sports. Fungidzira kuda kwake kwemitambo kwakakwenenzverwa zvakanyanya paBianca. Leonard Blair akaroora amai vaBianca Belair, Travonda Blair.
Mubatanidzwa waBlair unofadzwa nevana, pakati payo ndiyo EST sekudaidzwa kunodaidzwa. Ndiye mutsigiri anoshingairira Bianca, mwanasikana wake. Leonard Blair akambove nehusiku-hwakazadzwa husiku achitarisa mutambo weWrestleMania 37.
Zvinoshamisa kuti akasvetukira patafura yekofi, ndokuparadza midziyo mishoma. Ndiko kusvika kwakaita baba vaBianca kwaari kwaigona kusvika.
Mufananidzo unofadza nababa vake, Leonard Blair.
Zvizhinji Nezve Bianca Belair Amai - Travonda Blair:
Amai vaBianca Belair, Travonda Blair, vanowanzoti mwanasikana wavo angave shasha yeWWE.
Anosimbisawo mufaro wake kuti Bianca akawanawo mafambiro ake panguva chaiyo. Bianca asati akunda WrestleMania ina, Travonda akati, "Tiri kuzvitora."
Travonda anofara akaroora kuna Leonard Blair. Pamwe chete naLeonard, vakawana vana vashanu pamwe chete. Vana vanosanganisira Jeffery Phillips, Leonard Jr., Jermaine, Jasta naBianca.
Mufananidzo unofadza waamai vaBianca, Travonda Blair.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Bianca Belair Vanun'una:
Sezvambotaurwa, mukwikwidzi wevakadzi veRoyal Rumble ane vanin'ina vana. Mazita evanin'ina vaBianca Belair vanosanganisira Jeffery Phillips, Leonard Jr., Jermaine, naJasta.
Pamwe chete, vese vanga vachitsigira panguva yekurwira kwaBianca. Saizvozvowo, Sevaya vakavatangira, ivo vanga vachigadzika nhanho muminda yavo. Chisungo chakasimba chiripo pakati pavo.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Bianca Belair Hama:
Zvekare, weAmerican wrestler ane dzimwe hama. Bianca Belair ane mashoma mashoma emhuri. Kunze kwevabereki vake uye vanin'ina, iye anofanira kunge aine babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru. Ngatitorei cue zvinotevera.
Sezvakambotaurwa kare mune yedu Bianca Belair Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu,
Edward N. Toole ndiye muzukuru wake. Zvakare, isu tina Edward G. High, anova muzukuru wake. Aive muzvinafundo uye sachigaro webiochemistry paMeharry Medical College.
Mufananidzo wakajeka waEdward N. Toole; Sekuru-vazukuru vaBianca Belair.
Uyezve, ndiye wekutanga mutema mutungamiri weAlumni Association Board kuIndiana University. Ambuya vake vaive nemadziro akazadzwa nemifananidzo uye zvinyorwa zvemapepanhau. Akaitawo zvipo zvake kuCivil Rights Movement.
Kutaura zvishoma, tete vake ndiMiranda Hunt. Ndiye mumwe wevatema vekutanga kubatanidza St. Cecilia High School muNashville, Tenn.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki ndibaba vaamai vaBianca, Z. Alexander Looby. Aive gweta uye murwiri wekodzero dzevanhu muNashville.
Tarisai, Amainini vaBianca, Miranda Hunt - murwiri wekodzero dzevanhu.
Alexander anowana kiredhiti nekutangisa chikoro chechikamu chesangano muNashville. Uye zvakare, akamhan'ara mhosva dzakawanda akamiririra vadzidzi vakarambidzwa kubvumidzwa kuzvikoro zvevachena vachipesana nemutongo wedare repamusoro.
Bianca Belair Hupenyu Hwega:
Kunze kwebasa rake, iwe unogona kuwana Bianca Belair anotora kubva kune yake track zviitiko zvewrestling. Iye ane yepamusoro muviri kusimba, dema bvudzi uye shava-mavara maziso. Kuenderera mberi, iye anonakidza mutambi wacho ari munhu akasununguka muhupenyu chaihwo.
Bianca anosona iko kushuva kubva paudiki. Paakatanga CrossFit, Belair akagadzira zvipfeko zvake. Kusona kwakaenderera mberi paakasaina neWWE. Anobatanidza machira anopenya ne sequins, matombo echimbi, ngetani uye zvimwe zvekushandisa uye apedza makumi mashanu ekupokana zvipfeko.
Uye zvakare, Binky achiri kufarira basketball, kuchovha uye muKristu. Anogara kuOrlando, Florida, United States, nemurume wake, mumwe weWWE Superstar Montez Ford.
Panguva yekunakidzwa kuchovha nemurume wake, Kenneth Crawford.
Bianca Belair Mararamiro:
Kunyangwe ari munhu akavanzika, Bianca Belair parizvino anorarama hupenyu hwakagarika. Panguva ino yehupenyu hwake, anokwanisa kutenga mota dzemhando yepamusoro kubva kuFerraris kuenda kuPorsches kuenda kuLamborghinis, uye dzimba dzinodhura.
Sekureva kwemutapi wenhau, mari yaBianca Blair inofungidzirwa kunge inosvika mamirioni mashanu emadhora kubva muna 5. Sechibvumirano chake cheWWE, anowana muhoro wekutanga we $ 2021. Blair zvakare anoita zvimwe kubva mukutengesa kwekutengesa uye kuoneka kwePVV.
Mufananidzo waBinky Blair pane kumwe kuoneka kwake kwePPV.
Bianca Belair Untold Chokwadi:
Zvakare, parutivi neruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane mashoma anonakidza biography zviito izvo zvinokanganisa fancy yako.
Chokwadi # 1: Mamwe midhiya:
Blair akamutangisa mutambo wevhidhiyo muWWE 2019. Vakamuratidzirawo semunhu anotamba muWWE 2020. Mukupera kwaNdira 2020, WWE.com yakaratidza chiito chekutanga chaBlair chinotanga muMattel's Basic Series 107.
Chokwadi # 2: Hasha Dzake:
Mushure mekukunda kwake Bayley kuSmackDown, Bianca Belair akarwiswa neane godo Role Model. Kunyangwe achirovera Bianca Belair pamatanho esimbi, Bayley akarasikirwa nehondo. Uye, hongu, anga asiri kufara nezvekurasikirwa kwake.
Chiito chakatungamira maSuperstars maviri kupinda mukukakavara kubvira ipapo. Kunge kushamisika kweSmackDown Kupona Series kurasikirwa neRAW Ona clip yaBayley, Pamela Rose Martinez, achirovera Bianca pazasi.
Chokwadi # 3: Her 'EST' zita remadunhurirwa:
Bianca Belair akaburitsa kwakatangira yake 'EST.' zita remadunhurirwa. Anotaura kuti zvakatanga neake wekutanga-promo paNXT. Belair akaburitsa mazwi mamwechete kubva mukusimudzira. Kunze kwezvo, anotsigira kuti ndiri kuunza "est."
Izvo zvese zvakatanga nemazwi achiguma muESST. "Ndini wekutanga" "Ini ndiye akanakisa, ndakasimba, ndakashata uye ndakaipisisa." Kunyangwe zvakadaro, zvese nhetembo, est, EST., NXT. Bianca Belair ikozvino ndiyo EST. yeNXT, EST. yeWWE, nezvimwe.
Bianca Belair Biography Pfupiso:
Zvishoma nezvishoma, kunyangwe iwe usingakwanise kupfuura zvese zviri pamusoro, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveiye murwi weWWE.
Zita rizere: Bianca Nicole Crawford
Zita rekuzvarwa: Bianca Nicole Blair
Mhete zita: Bianca Belair, Binky Blair
Zuva rekuzvarwa: 9th Zuva raApril 1989
Nzvimbo yekuzvarirwa: Knoxville, Tennessee, nyika dzakabatana
Basa: Nyanzvi yekurwa
Dzidzo: Austin-East Magnet High Chikoro, University of South Carolina, Texas A & M University uye University of Tennessee
Baba: Leonard Blair
Amai: Travonda Blair
Vanun'una: Jeffery Phillips, Leonard Jr., Jermaine, naJasta.
Mumwe: Kenneth "Montez Ford" Crawford (m. 2018)
Hama: Edward N. Toole (sekuru-vazukuru), Edward G. High (muzukuru) naTete (Miranda Hunt).
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Aries
Hobbies: track uye munda, crossfit uye powerlifting, kusona, kupedza nguva nemhuri.
kukwirira: 5 ft 7 mu (1.7m)
Muhoro: $ 550,000 (2021)
Residence: Orlando, Florida, nyika dzakabatana
Tinotarisira kuti iwe wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukuvhara Bianca Belair's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu. Kunyangwe zera raBianca Belair achiri mudiki, aine ruzivo rwakaderera pane vamwe varwi vechikadzi, azviitira zvakanaka.
Belair aive nemhuri yakasimba. Nhengo dzemhuri yake dzakabatanidzwa mukugona kwavo kwakasiyana siyana, kunyanya muCivil Rights Movement. Kutevera sutu, kutarisa kwake, kutsunga, uye basa rakaoma zvakatanga kutamba.
Tarira, zvakabhadhara, pakupedzisira. Ku 'WrestleMania 37,' Bianca Belair naSasha vakagamuchira nhoroondo. Hatigone kutarisira chero chakaderera kubva kuna Bianca Belair. Fungidzira kuti mhuri yakamuchengeta patsoka dzake nguva dzese.
Uye zvakare, tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-up zvinofadza, uye zvinonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.